တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: September 2013
အချိန် ကာလအားဖြင့် ညအခါဖြစ်သလို ပြီးခဲ့တဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်က မိုးတွေ တဖွဲဖွဲ ရွာသွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ မိုးစဲသွားသောအခါ ပတ်ဝန်းကျင် တခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့ တော်သလင်းလပြည့် ဂရုဓမ္မ (သို့မဟုတ်) ကုရုဓမ္မ အကြောင်းလေး ရေးသားဖို့ရန် စာအုပ် အနည်းငယ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဂရုဓမ္မ (သို့မဟုတ်) ကုရုဓမ္မ အကြောင်းလေးကို စတင်ရေးသားလိုက်ပါတယ်...။
တော်သလင်းလဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အနေဖြင့် မှတ်သားစရာ ကောင်းလွန်းသော လဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ယင်းမာကြိုင်သင်း လ တော်သလင်း ဆိုတာ မြန်မာတို့ ဆိုရိုးပြုခဲ့ကြတာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် မိုးနှောင်းကာလဖြစ်သလို တော်သလင်း နေမင်းဟာ ငါး ပုဇွန် သေအောင် ပြင်းလွန်းပါ တယ်လို့လည်း ဆိုကြပြန်ပါတယ်...။
ဒါပေမဲ့ တော်သလင်းလပြည့်နေ့သည် မြန်မာတို့အတွက် နေ့ထူး နေ့မြတ် ဖြစ်ပါပေတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပါရမီ ဆယ်ပါးတို့တွင် သီလ ပါရမီနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေသောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ရှေ့မြန်မာ အစဉ်အဆက်က တော်သလင်းလပြည့်နေ့ကို ဂရုဓမ္မ အခါတော်နေ့ဟု ဆိုရိုးပြုကြပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်အခါတုန်းက မထင်မရှား ရဟန်းတော် နှစ်ပါး ဟင်္သာတကောင်ကို အလောင်းအစားနဲ့ သတ်ဖို့ ကြိုးစား အားထုတ်ကြပါတယ်။ ထို့ရဟန်းနှစ်ပါးသည် ကောင်းကင်ပျံဝဲနေတဲ့ ဟင်္သာကို ကျောက်ခဲဖြင့် လှမ်းပစ်လေရာ ကျောက်ခဲမှန်၍ ဟင်္သာသည် အော်ဟစ်မြည် တမ်းလျက် မြေပြင်ကျရောက်လျက် သေဆုံးခဲ့ရတယ်။
The story was told in reference toamonk who had killedawild goose. Two monks bathed in Aciravatī, and while standing on the bank, drying, they saw two geese appear. The monks tookabet as to which should hit the goose in the eye, and one of them threwastone which pierced one eye and came out of the other. The monk was reported to the Buddha. (Kurudhamma Jataka No-276)
ထိုအကြောင်းကို မြတ်ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် သိတော်မူသဖြင့် ချစ်သားရဟန်း သင်ဟာ သာသနာတော်မှာ ရဟန်းဝတ်နေပါလျက် ပါဏာတိပါတကံကို ပြုလုပ်တာ လက်ဆော့ ခြေဆော့ ရှိလှချေပြီ...။၊
ဟိုရှေးရှေးတုန်းက ဘုရားအစရှိသော သူတော်ကောင်းနှင့် ပညာရှိတွေဟာ သာသနာပ ကာလမှာ သတ်ဖို့ နေနေသာသာ သီလတရားတွေကို အသက်သမျှ တန်ဖိုးထား၍ စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြကြောင်းကို မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် အတိတ်ဇာတ်ဖြစ်သော ကုရုဓမ္မ ဇာတ်တော်ကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
The Bodhisatta was once born as the son of Dhananjaya, king of the Kurus, and, after his fathers death, reigned in Indapatta. He observed the Kurudhamma - that is to say, the pancasila - as did the queen mother, his queen consort, the viceroy, the chaplain, the kings driver, his charioteer, the treasurer, the keeper of the royal granaries, the palace porter and the courtesan of the city.
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:08 AM No comments:
ဆွဲအားကောင်းတဲ့ ဘဝ ကောင်းကင်
ကိုယ့် ဘဝ အမြင်မှာ...
ခွဲခြားနိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေ မကွယ်ပျောက်စေနဲ့...
ရှေ့တိုး မလား နောက်ဆုတ် မလား
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် မသိနိုင်သေးတဲ့အခါ
အနိုင် အရှုံး နှစ်ခုကြားမှာ
ကိုယ့် ကိစ္စနဲ့ ကိုယ် ဗျာများနေတဲ့အခါ
ကျော့ကွင်းမှာ ကျင်လည် ကျက်စားမနေပါနဲ့..
အတွင်း အပြင် နှစ်ခုဟာ
ထာဝရ မတည်မြဲဘူးဆိုတာ သိခဲ့ရင်
လွတ်လွတ် လပ်လပ် ပျံသန်းတာ
ငုတ်မိ သဲတိုင် တတ်နိုင် ဖျားရောက်ပေါ့...
ကိုယ့် ဒူးကို ကိုယ် ချွန်လို့
ဘဝကို အိတ်သွန် ဖာမှောက်ပြီး
ဆန္ဒတွေဟာ ဒီမြေပေါ်မှာ ဆန့်မယ်မထင်ပါဘူး...။
တော်တာ မတော်တာ မစဉ်းစားပဲ
ခန့်မှန်းရခက်လွန်းလို့ မရေရာ မသေချာနဲ့
တွေးလိုက်တိုင်း ကျေနပ်မှု မရှိတဲ့
ဘဝဆိုတဲ့ နာရီ လက်တံပေါ်မှာ
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 5:54 AM 1 comment:
မမြင်နိုင်သော ဂူထဲက အမှောင်
မမြင်နိုင်သော ဂူထထဲက အမှောင်
အဖြေ တခုကို ရှာဖွေနေဆဲ....။
သည်မှာ တွေးခေါ်မှု သံသယတွေနဲ့
အမှားကို ချိုမြိန်စွာ သောက်သုံး
ခုတုံ တခုလို့ ဖြစ်နေတုန်း....။
ကိန်းမှားနေတဲ့ သင်္ချာရဲ့ ဥပဒေသဟာ
မာနနဲ့ စွဲကပ်နေတဲ့ ဥပါဒါန်ဟာ
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 5:41 AM No comments: